Milkaa’inni barnoota daa’immanii, qophii dursinee goonuun murtaa’a! – siifsiin
Haata’u malee, deeggarsi daa’imman barnoota idilee dura ogummaa qayyabannaa bu’uura herreguu, dandeetti dubbisuu fi barreessuu isaanii dagaagfachuuf tattaaffiin godhan laafaa dha. Yeroo ammaa kannatti daa’imman miliyoon 250tti tilmaamaman erga baruumsa isaaniitiin kutaa 4ffaa gahanii booda barreessuu fi dubbisuu shaakalaa jiru. Rakkoowwaan armaan olitti ibsaman kana furuuf Dhaabbatni Baraarsa daa’immani (Save the Children) karoora isaa kan bara 2012-2018 A.L.A.tti turu baafate keessatti daa’imman osoo mana baruumsa idilee hin galin dandeettii qayyabannaa, dubbisuu fi barreessuu isaanii akka fooyyeffatan gochuuf xiyyeeffannoon hojjetaa jira. Dhabbatni Baraarsa Daa’immanii iddoo baruumsa mijataa uumuun daa’imman yaaddoo nageenyaa fi fayyaa tokko malee tasgabbiin baruumsa isaanii akka hordofan gochaa jira. Akkasumas, Dhaabbanni Baraarsa Daa’immanii tooftaalee baruu fi barsiisuu irratti bu’aa barbaadamu fiduun danda’an hojiirra oolchuudhaan daa’imman barnoota fi jireenya isaaniitiin milkaa’oo akka ta’an tooftaalee (maloota) gargaraa bocuudhaan hojiirra oolchaa jira.
Barnoota idileen duraa fi Qayyabannaa herregaa: Barnootni mana baruumsaa idileen duraa fi shaakalliin qayyabannaan herreegaa, sagantaa Dhaabbata Baraarsa daa’immaniitiin qophaa’ee, akka addunyaatti hojiirra oolaarra kan jiru yoo ta’u, kaayyoon isaas dagaagina barnoota idileen duraa fi shaakallii qayyabannaa herreegaa daa’immanii gargaaruuf kan xiyyeeffatee dha. Keessumattuu daa’imaan osoo mana barumsaa idilee hin galiin, kitaabolee fi meeshaalee deeggarsaa shaakalliidhaaf barbaachisan hin argatan. Walumaa galatti, kaayyoon sagantaa kanaa qabxilee gurguddoo armaan gadii kan of keessatti hammateedha.
Manneen baruumsa idilee utuu hin galin duraa, meeshaalee barbaachisoo ta’an guutuudhaan daa’imman bifa taphaan, sirbaan, faaruun, gochaa fi kanneen biroo bashannansiisaa ta’aniin fayyadamanii barsiisuun, dandeettii isaanii akka fooyyeffatan deggeeruudhaan manneen barnootaa idilee keessatti akka milkaa’an haala mijeessuu.
Previous Previous post: Lubbuu Daa’immanii Du’a Irraa Baraaruu!
Next Next post: Sadan Sooddoo